एनालग "डी-Nol" घरेलू उत्पादन। "डी-Nol ': रूस मा घरेलू analogues, समीक्षा
दुर्भाग्यवश, जठरांत्रिय पर्चा को ulcerative रोगबाट ग्रस्त गर्ने मान्छे, थप र थप बन्दैछ। र तिनीहरूलाई थुप्रै पहिले नै पहिलो हात देखेको छु दबाइ को प्रभावकारिता "डी-Nol।" तर यहाँ आज "छ जो विदेशी आधारित र लागत धेरै पटक सस्ता को pharmacological गतिविधि गर्न कमसल डी-Nol 'घर, सबैले थाह को एक एनालग छ भन्ने तथ्यलाई छ। यस्तो तयारी एक नजर अगाडी लिन यो छ।
दबाइ "छ डी-Nol '
विकल्प लागूऔषधको विचार गर्न अघि बढ्नु अघि सही एक माध्यम को विशेषताहरु के हो सम्झन हुनेछ "डी-Nol।"
तसर्थ, यस दबाइ दुवै astringent र घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने प्रभाव, त्यसैले जठरांत्रिय पर्चा को ulcerative रोगहरु को उपचार प्रभावकारी छ। औषधि यसको अपेक्षाकृत उच्च लागत बताउँछन् जो नेदरल्याण्ड, उत्पादन।
उपलब्ध विशेष ट्याब्लेट फारममा दबाइ र4वर्ष संग विरामीहरु गर्न प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। "डी-Nol 'समकक्षों (घरेलू र विदेशी) साना बच्चाहरु को उपचार को लागि पाटी एक माध्यम रूपमा किनभने सटीक dosing को impossibility को प्रयोग गरिन्छ।
दबाइ को Pharmacological गुण
दबाइ को मुख्य घटक छ विस्मुट tripotassium dicitratobismuthate। पेट प्रवेश यो सक्रिय पदार्थ, nerastvoronnom अल्सर र सुरक्षा फिलिम को erosions को सतह मा फारम र पक्षबाट settles। यसबाहेक, दबाइ prostaglandin ई को उत्पादन बढावा र बाक्लो को गठन क्रियाशीलता। दबाइ, एक वृद्धि एपिडर्मल वृद्धि क्षेत्रमा कमजोरीहरू लिएर 10 दिन पछि विरामीहरु मा।
घरेलू वा विदेशी - एक पेट अल्सर, gastritis र अन्य जठरांत्रिय रोगबाट, पेट अस्तर निष्ठा गर्न क्षति द्वारा विशेषता छन् जो मा, चिकित्सक "डी-Nol 'को एक एनालग रोगी सल्लाह दिन्छन् सक्छ। विशेषज्ञ, रोग को प्रकृति र यसको कठोरता को हदसम्म निर्भर सबैभन्दा उपयुक्त र प्रभावकारी चिकित्सा चयन गर्नुहोस्। यो संरचनात्मक विकल्प को त एक र दबाइहरु को pharmacological विशेषताहरु त्यस्तै हुन सक्छ।
"डी-Nol" नै एक माध्यम रूपमा, रूस मा घरेलू समकक्षों लगभग कुनै पनि फार्मेसी मा खरिद गर्न सकिन्छ। यो एक डाक्टर एक निर्धारण आवश्यकता छैन। तर, यो निर्धारण दबाइ बिना आत्म-प्रेरणा लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यस्तो बेवस्ताई पछि बिरामी स्वास्थ्य कारण र सम्बन्धित रोगहरु को एक जटिल योगदान हुन सक्छ।
यो विरोधी अल्सर उत्पादन रूस मा निर्मित र Helicobacter pylori मा एक bactericidal प्रभाव छ छ। सक्रिय दबाइ पदार्थ विस्मुट tripotassium dicitratobismuthate छ। यो घटक धन्यवाद, दबाइ विरोधी भडकाऊ र astringent दुवै गुण छ।
पेट को अम्लीय वातावरण मा एक पटक, दबाइ को प्रोटिन Substrate, को श्लेम लाग्एको झिल्ली को क्षतिग्रस्त अंश छुट्टयाएर छ जो बांध। फलस्वरूप, erosions र सतह फिलिम को अल्सर को प्रक्रिया गठन गरिएको छ। साथै, सक्रिय एनालग "डी-Nol" (घरेलू तयारी "Novobismol") हाइड्रोजन र prostaglandin ई को संश्लेषण को secretion बढाउँछ
यस्तो कार्यात्मक तितरबितर, रूपमा रोगहरु लागि एजेन्ट लागू पुरानो gastroduodenitis र gastritis exacerbation, ग्रहणी अल्सर र पेट। एकदम अक्सर, दबाइ पिन्चे आंत्र सिंड्रोम संग विरामीहरु गर्न निर्धारित।
यो4वर्ष को विरामीहरु गर्न दबाइ सिफारिस, तर दैनिक खुराक व्यक्तिगत विशेषज्ञ गणना गर्नुपर्छ। 6-8 हप्तासम्म एक दिन 2-4 पटक भोजन 30 मिनेट अगाडि स्वीकार गरे।
चिकित्सा को समीक्षा
ulcerative रोगहरु को उपचार को लागि राम्रो दबाइ गर्न मात्र साबित भएको छ "डी-शून्य।" घरेलु analogues, "Novobismol" विशेष तिनीहरूले पनि एकदम प्रभावकारी छन्। यो विरामीहरु र डाक्टर ले सकारात्मक प्रतिक्रिया द्वारा प्रमाणित छ।
व्यक्तिगत अवस्थामा, विरामीहरु चिकित्सा बारेमा नकारात्मक व्यक्त गर्दा सम्बन्ध, यो कारण चक्की को "Novobismol" छेउमा प्रभाव हो। र यो किनभने encephalopathy, आंत्र motility, वाकवाकी, उल्टी, छाला rashes (जो दबाइ गर्न जीव को सम्भावित प्रतिक्रिया हो) को विभिन्न उल्लंघन, बेचैनी ठूलो कारण, बुझ्ने छ।
साथै, सक्रिय एनालग "डी-Nol" (घरेलू तयारी "Novobismol") जिगर र मृगौला को विकार र gestation र बच्चालाई स्तनपान, जो पनि केही मानिसहरू मा indignation गराउँछ को अवधिमा contraindicated छ।
यस दबाइ घरेलू उत्पादन को एक एनालग अर्थ "डी-Nol" pharmacological समूह हो। यो gastritis र peptic अल्सर जठरांत्रिय रोगहरु भोगिरहेका विरामीहरु गर्न निर्धारित गरिएको छ। दबाइ सिफारिस र निवारक उपाय रूपमा erosive र ulcerative रोगहरु को पुनरावृत्ति रोक्न सकिन्छ। अक्सर पुरानो gastritis र गैर-अल्सर तितरबितर को उपचार मा प्रयोग। प्रभावकारी सक्रिय एनालग "डी-Nol" (घरेलू तयारी "Venter") को लागि जटिल उपचार मा giperatsidnom gastritis, peptic अल्सर र औषधीय र gastroesophageal भाटा रोग।
एक disaccharide - मुख्य सक्रिय एजेन्ट घटक लागि, यो कार्य गरिन्छ sucralfate। पदार्थ sucrose सल्फेट र हुन्छन् एल्यूमीनियम हीड्राकसीड। यसलाई यसरी एक सुरक्षा फिलिम सिर्जना गर्ने, क्षतिग्रस्त mucosal साइटहरूमा गठन भएको एक प्रोटिन प्रतिक्रिया। यस्तो "ढाल" हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्षरण र अल्सर प्रभाव जोगाउँछ, र कुशल ऊतक पुनर्जनन सुविधा।
आवेदन र dosing सिस्टम को सुविधाहरू
कुनै पनि एनालग संग रूपमा "डी-Nol" घरेलू दवादारू "Venter" खानाको 30 मिनेट अगाडि लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। दबाइ को दैनिक खुराक24 ट्याब्लेटको हो र रोग र यसको प्रवाह को प्रकृति मा निर्भर गर्दछ। अधिकतम चिकित्सकीय प्रभाव हासिल गर्न र सम्भव प्रतिकूल प्रतिक्रिया जोगिन, औषधिको खुराक गणना गर्ने उपस्थित डाक्टर सुम्पिएको हुनुपर्छ। विशेषज्ञ खातामा रोगी को सबै व्यक्तिगत विशेषताहरु लिन र उपचार को अवधि निर्धारण गर्नेछ।
त्याग्न लागूऔषधको प्रयोग dysphagia, पुरानो गुर्दे रोग, रक्तस्राव वा ileus लागि आवश्यक छ। दबाइ प्राप्त गर्न Contraindications पनि गर्भावस्था र lactation अवधि हो।
दबाइ मा विरामीहरु को राय
दबाइ रूपमा "डी-Nol 'घरेलू समकक्षों समीक्षा ज्यादातर सकारात्मक छन्। यो उच्च मुख्य घटक को pharmacological कार्य कारण हासिल छ जो, लागूऔषधको दक्षता कारण हो। विशेष, राम्रो "Venter" विरामीहरु गर्न दबाइ प्रतिक्रिया। शब्दहरू आफ्नो द्वारा न्याय, मान्छे उपचार को परिणाम संग धेरै खुसी छन्। तिनीहरूले लागूपदार्थको र अन्य लाभप्रद गुण को चिकित्सा द्वारा नजिकै को स्थिति मा एक तीव्र सुधार, उपलब्धता याद गर्नुहोस्।
कृतज्ञ टिप्पणी धेरै भए तापनि त्यहाँ जो चिकित्सा कारण को सम्झनाहरु मात्र नकारात्मक छ ती विरामीहरु छन्। केही यस्ता myalgia, vertigo, सुनिंनु, छाला दाना, वाकवाकी, उल्टी वा टाउको दुखाइ रूपमा लागूऔषधको साइड इफेक्ट अनुभव थियो। यी प्रदर्शनहरू प्रत्येक महत्वपूर्ण बेचैनी छुटकारा।
सामान्यतया, मान्छे एक विकल्प दबाइ "डी-Nol 'घरेलू समकक्षों लागि खोज मा चयन गर्नुहोस्। "Ventrisol", बीच, छैन बुरा छ। यो उपकरण पोल्याण्ड बनेको छ, र यो अक्सर अल्सर र सैनिक mucosa को erosive घाउ निदान गरिएको छ जो विरामीहरु गर्न निर्धारित गरिएको छ।
यस दबाइ संरचना र pharmacological कार्य रूपमा लागूपदार्थ गर्न सकेसम्म नजिक "डी-Nol।" यसको मुख्य सक्रिय संघटक जो क्षतिग्रस्त mucosal साइटहरूमा सुरक्षा फिलिम को गठन प्रबर्धन गर्ने, विस्मुट पनि छ। ट्याब्लेट फारममा एजेन्ट उत्पादन र, पेट र duodenum को ulcerative घाउ, र पनि gastroduodenitah मा gastritis प्रयोगको लागि देखाइएको छ।
यो क्षरण र उनको तीव्र निको र scarring बढावा जो प्रतिकूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, प्रभावबाट श्लेम लाग्एको झिल्ली को अल्सर को दवादारू को सक्रिय संघटक सुरक्षित राख्दछ। साथै, विस्मुट गैस्ट्रिक अम्लता को प्रदर्शन असर गर्दैन।
विशिष्ट आवेदन सन्दर्भमा र वितरण प्रणाली, "डी-Nol" दबाइ "ventrisol" को एक माध्यम रूपमा साथ 30 मिनेट खानाको अघि लागू गर्नुपर्छ। उपचार को पाठ्यक्रम रोग खुलारूपमा निर्भर, त्यसैले मात्र योग्य डाक्टर यो कुरा गर्न उपस्थित छ।
दबाइ "Laksigal": प्रयोग, सङ्केत गर्छ, संरचना, वर्णन, analogs र समीक्षा लागि निर्देशन
को "फ्लू" के हो? "फ्लू" चक्की। वजन लागि "फ्लो"
दबाइ "Concor कोरि": प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ, वास्तविक समकक्षों
समीक्षा: "Flucostat" thrush। "Flucostat" thrush - लिइरहेको जस्तै
संयुक्त-जोडी - आँखा र कान लागि खस्छ
जो राम्रो छ: "Duphalac" वा "Normase"? डाक्टर र रोगी प्रशंसापत्र को सल्लाह
कलाई रूस मा हेर्छ। घण्टा रूसी निर्माताहरु
Chekalkin नट: बीउ, हेरविचार, सुविधा र समीक्षा देखि बढ्दै
प्रभावकारी कार्यक्रम वजन - प्लस वा माइनस?
माथिल्लो प्रेस: व्यायाम, सल्लाह र समीक्षा एक सेट
बच्चाहरु को लागि Antiemetic लागूपदार्थ - विषाक्तता संग संघर्ष गर्दै छन्
सौन्दर्य पसल - विभाजन लागि मास्क घरमा समाप्त